Habibiana tsy roa aman-tany …: olona roa notapahin-doha, roa hafa nesorina voamaso | NewsMada
Habibiana tsy roa aman-tany …: olona roa notapahin-doha, roa hafa nesorina voamaso
Mirongatra indray ny tsy fandriampahalemana ao Mahabo. Raim-pianakaviana iray no lasibatry ny halatra taova raha izy namonjy fodiana afakomaly alina. Noloaran’ireo tsy mataho-tody ny voasamasony roa. Vao haingana koa ny tranga hafa, nanapahan-doha olona roa.
Miverina mirongatra indray ny halatra taova ao amin’ny faritr’i Menabe, distrikan’i Mahabo. Lasibatr’izany habibiana izany ny raim-pianakaviana iray tokony ho 50 taona raha iny izy hamonjy fodiana alina iny, tokony ho tamin’ny 07 ora tao Kokosera Magnamby. “Avy namonjy lanom-pianakaviana ilay lehilahy tamin’io fotoana io. Mamo izy ary niara-nody tamin’ireo namany roa lahy hafa”, hoy ny fanazavan’ny zandary ao an-toerana. Tsy fantatra anefa ny zava-niseho fa nony dify azy metatra maromaro ireo roa lahy no niverina tampoka. Voadaroka ilay raim-pianakaviana ka tsy nahatsiaro tena. Tamin’izay indrindra, noloaran’ireo roa lahy ny voamasony roa ka niala tanteraka tamin’ny hodimasony. Hatramin’ny ora nanoratanay farany, tsy mbola voafaritra mazava ny antony nanaovana ity habibiana ity. Fantatra fa efa voasambotra omaly ihany ny iray tamin’ireo voarohirohy tamin’ity asa ratsy ity raha mbola karohina kosa ny iray hafa. Anatin’ny fanadihadina ny tranga ny mpitandro filaminana ao an-toerana ary hamoahana filazana fikarohana mihitsy ilay lehilahy iray nahavanon-doza.
Tsy nahitam-bahaolana ny tsy fandriampahalemana
Taorian’ny tranga, nalefa vonjimaika tao amin’ny hopitaly ao an-toerana izy ary nafindra ao amin’ny hopitalin’i Morondava kosa amin’izao. Efa afa-doza io lehilahy io, hoy hatrany ny zandary ao Mahabo. Efatra izany ireo niharan’ny habibiana tato anatin’ny andro vitsy. Roa nesorina ny masony ary ny roa hafa kosa, notapahan-doha. Midika izany fa tsy nahitana vahaolana na efa nanalana tompon’andraikitra aza ny tsy fandriampahalemana any amin’iny faritra Menabe iny.
Tsiahivina fa efa nanao antso avo fanairana ny evekan’i Morondava amin’ny hijerena akaiky iny faritra iny.